Frank Lampard Oo Noqday Tababarayaasha Ugu Horeeya Ee Horyaalka Premier league Shaqada Laga Caydhin Doono. - Gool24.Net
Frank Lampard Oo Noqday Tababarayaasha Ugu Horeeya Ee Horyaalka Premier league Shaqada Laga Caydhin Doono.
Maamulka kooxda Chelsea ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in Frank Lampard uu yahay macalinka cusub ee kooxdooda kadib markii uu Maurzio Sarri ka baxay Stamford Bridge.
Frank Lampard ayaa farxad ka muujiyay in uu ku soo laabtay kooxdii uu halayayga ku soo noqday ee Chelsea waxaana farxadan la qabay taageerayaasha Blues oo maalmihii ugu danbeeyay sugi kari la’aa in ay arkaan Lampard oo loo magacaabay shaqada kooxdooda.
Laakiin Frank Lampard ayaa hadda loo saadaaliyay in uu noqon karo macalinka ugu horeeya ee shaqada tababaranimo ee kooxaha Premier league laga caydhin doono xili ciyaareedka cusub.
Inta aan la bilaabin xili ciyaareedka cusub shirkadaha saamaynta badan kubbada cagta iyo sportks ku leh ee bixiya sharadka khamaarka lagu galo ayaa sii saadaaliya tababarayaasha shaqada Premier League loogu hor caydhin doono kuwaas oo uu hadda Frank Lampard qayb ka yahay.
Shirkada Paddy Power ayaa Frank Lampard ku dartay liiska tababarayaasha shaqada laga caydhin karo ka hor inta aan la gaadhin December 25,2019 waxaana sidoo kale liiskan ku jira tababarayaal badan oo uu ka mid yahay Ole Gunnar Solskjaer.
Mulkiilaha kooxda Chelsea ayaan wax samir ah u lahayn in uu shaqada kooxdiisa ka caydhiyo tababarayaasha waana sababta loo saadaaliyo in Lampard uu ka mid noqon karo tababarayaasha ugu horeeya ee kooxdiisa laga caydhin karo.
Frank Lampard ayaa sheegay in maamulka kooxdiisa Blues ayna waajib kaga dhigan in uu kooxda xili ciyaareedka cusub u saaro Champions League oo ay afarta sare kaga dhamaystaan horyaalka balse waxa uu qiray in ay masuuliyadiisa tahay in uu kooxda afarta sare ku soo saaro.
Chelsea ayaan wax dul qaadah u muujin tababarayaasha kooxdeeda waxaana la ogaay Mauzio Sarrio oo dhawaan kooxda ka baxay culayskii la saaray markii ay natiijooyinka xun Blues la kulmaysay.
Walwalka ugu wayn ee laga qabo shaqada Frank Lampard ee Chelsea ayaa ah in aanu helin waqtiga uu ugu baahan yahay in uu saamayn ugu yeesho Stamford Bridge maadaama oo ay kooxdu iibisay xidigii ugu fiicnaa ee Eden Hazard.
Si kastaba ha ahaatee, Frank Lampard ayaa haddaba ku soo baxay liiska tababarayaasha loo saadaalinayo in shaqada tababaranimo ee kooxaha Premier league laga caydhin doono.